Creative Writing » မြင်ရတွေ့ရ ရင်ဝမချိ	45
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟမ်ဘာတွေဖြစ်လို့လဲသော်
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အမေစုလဲမတက်နိုင် ကလေးတွေလည်း အချောင်အထဲရောက်ကုန်မှာစိုးမိလို့ပါ။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ၀ီ့ဂို ရှစ်​ဆယ်​
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဖွတ် ဒီ ၀ီ ကြား ဘာကိုနားလည်ရမှန်းကိုမသိတော့
naywoon ni says: ဒီတိုက်​ပွဲကို ​ကျောင်းသားကိစ္စ လို့လဲ မမြင်​ဘူး ဥပ​ဒေ ကိစ္စလို့လည်းကွက်​​ပြောလို့မရဘူး ။ တစ်​ကယ်​တမ်းဖြစ်​​နေတာက ” ဓ​လေ့ ထုံးတမ်းစဉ်​လာကို ဖက်​တွယ်​ထားချင်​တဲ့ သူ​တွေနဲ့ ဓ​လေ့ ထုံးတမ်းစဉ်​လာ ကို ငြီး​ငွေ့သူတို့ရဲ့ တိုက်​ပွဲ ” လို့ပဲ မြင်​တယ်​ ။ ဒီကိစ္စ ပြီးသွားလည်း ​နောက်​ထပ်​ တိုက်​ပွဲ​တွေ ဆက်​ဖြစ်​​နေဦးမှာပဲ ။ ​လူမှု ​တော်​လှန်​​ရေးက ခုမှ စတာ ။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အဲ့အမြင်​က​တော့ ​သေချာ​ပေါက်​လွဲ​နေ​သေးတယ်​ဘနီ
naywoon ni says: မလွဲပါဘူး​အေ မယုံရင်​​စောင့်​ကြည့်​လိုက်​ ဒါက ကွန်​ဆာ​ဗေးတစ်​နဲ့ ​လေဘယ်​လ်​ ​ရှေးရိုးနဲ့ ၂၁ ရာစု အ​တွေးအ​ခေါ် ထိပ်​တိုက်​ဆုံတာ ။ အ​တွေးအ​ခေါ်တိုက်​ပွဲ ယဉ်​​ကျေးမှု ​တော်​လှန်​​ရေး ။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: လွဲ​နေ​သေးတယ်​ဆိုတာကလွဲ​နေ​သေးတယ်​ဆိုတာကဒီလိုပါဘနီ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . အဘနီ ကို ထောက်ခံပါသည်။ အသွင်ကူးပြောင်းစ တိုင်းပြည်တွေမှာ လစ်ဗြဲ နဲ့ ကွန်တစ် ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး လွန်ဆွဲပွဲ ဖြစ်စမြဲ။ အဲဒီ အခါ ကွန်တစ် အနိုင်ရစမြဲ။ အချိန်တစ်ခုကို လွန်မှ လစ်ဗြဲနဲ့ ကွန်တစ် မျှခြေ ပြန်ရောက်ပါသည်။ ဒီကြားကာလလေးက စပ်ကူးမတ်ကူး၊ တိုင်းပြည် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ မကွဲဖို့ တစ်ခုပဲ လိုပါသည်။ ဒီစပ်ကူးမတ်ကူး ကာလ လွန်သည်နှင့် ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် နိုင်ငံကို နှစ် ၅၀ အတွင်း ရောက်မည်ဟု ယုံပါသည်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မှန်ပါတယ်။ ဘဖောပြောတာ ပိုပြီး အကျိုး အကြောင်း ညီညွတ်ပါတယ်။ မျှစ်က လောဘကြီးသွားလို့။ အခု သပိတ်မှောက်ကိစ္စကိုတော့ ဘဖော ဘာမှ မပြောသေးဘူးနော်။ ဖြစ်နိုင်ရင် သဘောထားလေး သိချင်ပါတယ်။
Was this answer helpful?LikeDislike 579
တိမ်မည်း says: ဒေါ်စုကို ချစ်တာ နှစ်ရာမရောက်စေဖို့ လို။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဒီမို​ရေစီရဲ့သ​ဘောကို ​သေ​သေချာချာနားလည်​မှီးမိုက​ရေစီနိုင်​ငံအဖြစ်​​သေ​သေချာချာရပ်​တည်​နိုင်​မှာပါ။
မြစပဲရိုး says: ဒီပွဲ မှာ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အ​ပေါ်ကနှစ်​​ကြောင်းလုံးကို ​ထောက်​ခံတယ်​။
မွသဲ ( 17082011 ) says: အရီးပြောတာမှန်တယ် အရီးကိုထောက်ခံတယ်။ အဲ့လိုပြောချင်တာမပြောတတ်လို့
kai says: ဒေါ်စုက.. ဘုန်းကြီးတွေပါရင်..မတို့မထိ(ရဲ)တော့…။ မပြော(ချင်)တော့…။
နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ကြ..။ ဟိုဖက်ဒီဖက်အစွန်း.. ကြိုက်ရာရွေးကြ…။
အလည်မှာ… အရောရောအထွေးထွေးရပ်မနေသင့်…။ ==
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အပေါ်က စာကြောင်း နှစ်ကြောင်းကို ထောက်ခံပါတယ် သဂျီး ။ သို့သော် သဂျီးနဲ့ မျှစ်ကြော် ကီးလွဲနေတာရှိတယ်။ အဲဒါက သဂျီးက ဗုဒ္ဒဘာသာဘက် ဇောင်းပေးပြီး ပြောတာ။ မျှစ်ကြော်က ထေရ၀ါဒ နိုင်ငံတွေ အကြောင်း သိပ်မဖတ်ဖူးဘူး။ မျှစ်က အရှေ့အလယ်ပိုင်းပဲ ကြိတ်တာ။ အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံတွေမှာတော့ အထက်က စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းဟာ ရာနှုန်းပြည့် မှန်ပါတယ်။ ထေရ၀ါဒ ကိုတော့ မသိ။
kai says: picture of the month ရဲတွေကလည်းအသက်ငယ်ငယ်..။ ကျောင်းသားတွေများ…ပိုလို့ငယ်…။
Wow says: Thant Htike
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဘုန်​ကြီးကိုဖယ်​ထုတ်​ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်​​သေတွင်းကိုယ်​တူးသလိုဖြစ်​နိုင်​မယ်​။
naywoon ni says: ဒီပုံကိုမြင်​ရ​တော့ သပိတ်​​မှောက်​တာက ​ကျောင်းသား​တွေလား ရဲ ​တွေလား သိပ်​မသဲကွဲ​တော့ဘူးရယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ဘာမှပျောချင်ပုစ်
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ​ရှေ့ကိုသွား​နေကြတာလား ​နောက်​ပြန်​လှည့်​​နေကြတာလား။
padonmar says: သော်ရေ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဒုံရင်းက ဒုံရင်း​ပေါ့ တီဒုံ​ရေ
ဦးကြောင်ကြီး says: ဟုတ်တယ်ဟေ့.. နာရေးကူညီမှု အသင်းက ကျော်သူတို့ လင်မယား ငအတွေ၊ ရွှေညဝါဆရာတော်၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဆရာတော်၊ ရှင်ဆန္ဒာဓိက တို့က မြှောက်ပေးနေတာ၊ ယူအန်အေက ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဦးအေးသာအောင်နဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီခေါင်းဆောင်တွေက ညာခိုင်းနေတာ.. ဒေါက်တာသိန်းလွင်နဲ့ ဒေါ်ညိုညိုသင်းတို့က ရုပ်သေးဆရာမတွေ..။
ခင်ဇော် says: စိမ်း ခဲ့ပြီ
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဒါာက​တော့ များသွားပါပြီ။
မြစပဲရိုး says: ပညာရေး ဥပဒေကြီး ကို မိုးပျံ အောင် ပြင်ထားပြီး နောက်က အကောင်အထည်ဖော်မဲ့ သူတွေ က သူခိုး တွေချည်း ဖြစ်နေရင် အောင်မြင်မယ်တဲ့လား။
တစ်နေရာထဲ ထိုးကောင်းလဲ ဘုတ်အုပ် ထဲ မှာ ရေးထားတဲ့ စာတွေ ဘဲ ကောင်း တာ မြင်ရမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: မဟုတ်ဘူးဦးကြောင်မှားနေပြီ။ ခုကလေးတွေလုပ်နေတာ တောင်းနေတာတွေဟာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကို ကိုယ်စားမပြုဘူး။ ဒါကို ပြည်တွင်းနေသူတွေပဲပိုသိတယ် ဦးကြောင်။ ခုဟာကဒေါ်စုကိုအကျပ်ရိုက်အောင်လုပ်တာဟုတ်ရင်ဟုတ် မဟုတ်ရင်တချိန်မှာဒေါ်စုလက်ထဲကအာဏာကိုပြန်လုဖို့လူစုနေတဲ့လူတစုရဲ့စနက်ပဲ။ မူမမှန်ဘူး
ရာမည says: ဒို့ အရေ
ဒို့ အရေ :-D
Alinsett@Maung Thura says: ဟင်းးးးးးးး
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့.. အဲဒီ ပြင်းထန်လွန်းလှတဲ့ သပိတ်ကို မထောက်ခံပါဘူး…
CharTooLan says: အူးကြောင်ယဲယဲနီနေဒါဂို မကျိယက်ဝူး များကယ်ဂျင်ဒယ်
ဒယ်ဒီသဂျီးမန်း အူးကြောင်ဂိုခဏခဏစိမ်းခွင့်ပျုဘာ သုဂိုများကယ်မှဖစ်မယ် :D
ဦးဦးပါလေရာ says: .​တွေ့လား….
ခင်ခ says: လက်ပတန်း အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်းသားထုလည်းမှားတယ်မထင်။ တားမြစ်ဖို့ရောက်နေကြတဲ့ရဲတွေကိုလည်း အပြစ်မဆိုချင်ပါဘူး။ နှစ်ဖက်လုံးကို သနားမိတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ရှင်ဆန္ဒာဓိက က သွေးထိုးပေးသူလား၊ ဒေါ်စုဆီက အာဏာလုမည့်သူလား၊ ကူမြူ နစ် ဘုန်းကြီးလား လုပ်ပါဦး လက်တွေ့မပြောနဲ့ ပါးစပ်တောင် မဟရဲတဲ့ ဆ်ိတ်စွမ်းအားရှင် အပေါင်းဒို့..
မြစပဲရိုး says: ဘယ်ဘုန်းကြီး ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘုန်းကြီး ဆိုတာ ဘုန်းကြီး အလုပ်လုပ် မှ ဘုန်းကြီး လို ဆက်ဆံ လို့ ရပါမယ် ကြောင်ကြောင်။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ဟုတ်​ကဲ့ မျှမျှတတ ဖြစ်​ဖို့ဆရာ​တော်​က​ပြောတာ။​ဆွေး​နွေးမှု အတည်​ပြုမျု မပြီးခင်​ ဇွတ်​လုပ်​ဖို့မဟုတ်​။NNER ​ကော ​ကျောင်းသား​ခေါင်း​ဆောင်​​တွေကပါ လွှတ်​​တော်​ကြားနာမှုကိုမတက်​တာဟာ ဘာအဓိပဲလဲ။လိုချင်​တာက လွှတ်​​တော်​မှာလား ရန်​ကုန်​မှာလား၊။ ရန်​ကုန်​မချီရလို့ လွှတ်​​တော်​မကြားနာနိုင်​တာကိုက အဓိက သာမည လွဲ​နေပြီ၊ပူ​စေချင်​တာ သက်​သက်​ ဖြစ်​​နေပြီ။ဖြစ်​​နေပြီ။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ပူခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်​ကဘာလည်း ​ဒေါ်စု ​ချောက်​ထဲကျဖို့။
kai says: ဟယ်…
နောက်၁၀နှစ် ၂၀၂၅မှာက.. ဦးမင်းအောင်လှိုင်..။ Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: သူကြီးပြောတာ သေချာသလောက် ဆိုရင်…
ဒါပဲ။ Was this answer helpful?LikeDislike 36
apolo11 says: တကယ်တော့ မတ်လ (၁) ရက်နေ့ မတိုင်ခင် အချိန် အထိကိုတော့
ဦးကြောင်ကြီး says: ဆိတ်စွမ်အားထက် လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ကြသူများ……
7 March 2015 လာမယ့် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ကျင်းပမယ့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမူကြမ်း ကြားနာပွဲကို အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၂ဝ ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက တက်ရောက်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။